China Hydrocolloid အနာဆေးထည့်သည့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများ | အရှေ့တိုင်း
Hydrocolloid အနာဆေးထည့်ခြင်းသည်မြုံ၊ hypoallergenic၊ စုပ်ယူနိုင်သော hydrocolloid ဆေးထည့်သည့်အရာများသည် polyurethane ရုပ်ရှင်အပြင်ဘက်အဖုံးပါသည့်မိမိကိုယ်ပိုင်ကော်အလွှာပါဝင်သည်။ အနာ exudate နှင့်ထိတွေ့ပါက hydrocolloid အလွှာသည်ပေါင်းစပ်ထားသောဂျယ်လ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးစိုထိုင်းသောအနာကုသမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးသည်။
ဖော်ပြချက် တစ်သင်းလုံးကကစားသမားအရွယ်အစား အထုပ်
Hydrocolloid နယ်စပ်ဆေးထည့်ခြင်း (ပါးလွှာသည်) ၅ စင်တီမီတာ ၅ ပေ (၂'x ၂ '') 20
Hydrocolloid နယ်စပ်ဆေးထည့်ခြင်း (ပါးလွှာသည်) 10cmx10cm (4''x4 '') 10
Hydrocolloid နယ်စပ်ဆေးထည့်ခြင်း (ပါးလွှာသည်) ၁၅ ပေ x ၁၅ စင်တီမီတာ (၆'x ၆ '') 10
Hydrocolloid နယ်စပ်ဆေးထည့်ခြင်း (ပါးလွှာသည်) ၂၀ စင်တီမီတာ (၈'x ၈ '') 10
Hydrocolloid နယ်စပ်တစ်သင်းလုံးကကစားသမား၊ ဖနောင့် 8cmx12cm (3 1/8''x4 3/4 '') 10
Hydrocolloid နယ်စပ်တစ်သင်းလုံးကကစားသမား, sacral ၁၂ စင်တီမီတာ ၁၈ စင်တီမီတာ (၄ ၃/၄'x ၇/၈ '') 10
Hydrocolloid နယ်စပ်တစ်သင်းလုံးကကစားသမား, sacral 15cmx18cm (၆''x7 ၁/၈ '') 10
Hydrocolloid ပါးလွှာသောတစ်သင်းလုံးကကစားသမား 5cmx10cm (2''x4 '') 10
Hydrocolloid အနာဆေးထည့်ခြင်းသည်မြုံ၊ hypoallergenic၊ စုပ်ယူနိုင်သော hydrocolloid ဆေးထည့်သည့်အရာများသည် polyurethane ရုပ်ရှင်အပြင်ဘက်အဖုံးပါသည့်မိမိကိုယ်ပိုင်ကော်အလွှာပါဝင်သည်။ အနာ exudate နှင့်ထိတွေ့ပါက hydrocolloid အလွှာသည်ပေါင်းစပ်ထားသောဂျယ်လ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးစိုထိုင်းသောအနာကုသမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးသည်။ Polyurethane film သည်အစိုဓာတ်ငွေ့ပြန်ခြင်းနှင့်ရေစိုခံခြင်းနှင့်ဘက်တီးရီးယားနှင့်ပြင်ပညစ်ညမ်းမှုများကိုတားဆီးသည်။
3. အင်ဇိုင်းအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းကိုမြန်စေခြင်း၊ ကြီးထွားစေသောအချက်၏သက်ဝင်စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အနာပျောက်ကင်းစေခြင်း။
နာတာရှည်အနာ၏မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းသောစွမ်းရည်ကို "နိုး" ပါ
၅။ ဆဲလ်အမျိုးအစားများ (ဥပမာ macrophage, neutrophile granulocyte) တို့သည်စိုထိုင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိပြီး activate ဖြစ်သည့်အနာအတွင်းရှိအခြား microorganism များကိုသေစေနိုင်သည်။
9. အနာသို့ဖိအား၊ ပွတ်တိုက်မှုနှင့်ညှပ်အားကိုလျှော့ချပြီးသွေးထောက်ပံ့မှုကိုတိုးတက်စေပါ
၁၀။ တံတွေးမထွက်နိုင်ပါ၊ epithelium cells ခွဲဝေမှုကိုတိုးမြှင့်ပြီးအလွယ်တကူပြောင်းရွှေ့သွားမည်ဖြစ်သဖြင့်အနာပျောက်စေသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိုစေလိမ့်မည်။
ရှေ့သို့ Oriented 150U Ultrasound nebulizer CE ISO နှင့် FDA နှင့်အတူ
နောက်တစ်ခု: ညှိနိုင်သောသွေး LANCET